Odayaashii Soo Xulay Xildhibaanada Kasoo Jeeda Jubbaland Iyo Koonfur-Galbeed Oo Lagu Soo Bandhigay BuulaFulaay (DHAGEYSO+SAWIRO) – Calamada.com
Odayaashii Soo Xulay Xildhibaanada Kasoo Jeeda Jubbaland Iyo Koonfur-Galbeed Oo Lagu Soo Bandhigay BuulaFulaay (DHAGEYSO+SAWIRO)
calamada August 6, 2019 1 min read
Xaflad ballaaran oo lagu soo dhaweynayey Odayaashii ka baraa’o qaatay maamulada isku magacaabay Jubaland iyo Koonfur-Galbeed ayaa ka dhacday degmada Buula-Fulaay ee wilaayada Baay iyo Bakool, taas oo ay ka soo qeyb galeen culimo, mas’uuliyiin iyo qaar ka mid ah Odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed.
Xafladan ayaa lagu soo bandhigay dufcadii 1aad ee Odayaashii ka soo haray maamulada Julbanad iyo HiirShabelle, waxaana xaflada loo qabtay ay gunaanad u ahayd dowro in muddo ah socotay oo loo qabtay Odayaasha.
Odayaashan oo gaarayey ku dhawaad 100 oday dhaqameed ayaa ahaa ergadii soo xushay xildhibaanada golaha dhawaaghiida ee laga soo doortay Jubaland iyo Koonfur-galbeed.
Odayaashan oo gaarayey ilaa 80 xubnood ayaa ka mid ah ergadii soo ajiibtay baaq towbadkeenka ahaa oo ay Xarakadu dhawaan u jeedisay odayaasha soo xulay golaha dhawaaghiida ee kooxda ridada kaas oo ku koobnaa muddo 45 cisho ah.
Xarakada ayaa horay u soo bandhigtay odayaashii towbadkeenayaasha ahaa ee ka baraa’o qaatay maamulada Galmdug iyo HiirShabelle,(LINK) kuwaas oo lagu soo bandhigay degmada Buq-Aqable ee wilaayada hiiraan.
Halkan Ka Dhageyso Barnaamijka Gaarka Ah.
Previous: Halkan Ka Dhageyso Barnaamijka Caalamulyowm 05-12-1440-Hijri.
Next: Saraakiil Ka Tirsan Dowladda Itoobiya Oo Lagu Toogtay Addis Ababa.